चितवनमा गठबन्धनको एकैसाथ चुनावी अभियान सुरु | Chitrawan Khabar
रामेछाप बाट काठमाडौँ आउंदै गरेको बस दुर्घटना , ९ को मृत्यु
७. सप्तगण्डकीका प्राध्यापकमाथि हातपात भएको भन्दै अनेरास्ववियू क्रान्तिकारीको आपत्ति
८. १५ महिला र ९१ पुरुष सहित १०६ जनाले गरे चनौलीमा रक्तदान
चितवनमा गठबन्धनको एकैसाथ चुनावी अभियान सुरु
संयुक्त लोकतान्त्रिक गठबन्धनले चितवनमा एकैसाथ चुनावी घरदैलो सुरु गरेको छ । सत्तारुढ दलहरुको गठबन्धनले मेयर, अध्यक्ष, उपमेयर, उपाध्यक्षमा साझा उम्मेदवार चयन गरेर अधिकत्म वडातहमा समेत सीट बाँडफाड मिलाएपछि एकैसाथ चुनावी अभियानमा लागेका हुन् ।
प्रचारप्रसार समितिका संयोजक तथा कांग्रेस चितवनका उपसभापति राजीव न्यौपानेले चितवनका सबै वडातहमा चुनावी घरदैलो सुरु भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार हरेक दिन कम्तिमा ४ वडामा प्रमुख, उपप्रमुख सहितको टोली पुगेर जनताका सुझावहरु संकलन गरिने छ । पालिकाको विकासका योजना सहितका प्रतिवद्धताबारे जनतालाई जानकारी गराउन चुनावी घरदैलो सुरु भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अधिकाँस वडामा चुनावी तालमेल भएको छ ।
७ वटै स्थानीय तहलाई लक्षित गरेर सत्तारुढ दलका शिर्षनेताहरुद्वारा सम्बोधन गर्ने गरी यही साता भरतपुरमा वृहत आमसभा हुने स्रोतले जनाएको छ । पालिका प्रमुख, उपप्रमुखहरुले भोलिसम्म साझा प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक गर्नेछन् । पुरै वडा, वडाध्यक्ष र एक सदस्य, मिश्रित उम्मेदवार गरी तीन मोडेलमा वडातहमा समेत तालमेल भएको छ । तालमेल हुन नसकेका थोरै वडामा मिश्रवत प्रतिस्पर्धा हुनेछ । भरतपुर महानगरमा भने कांग्रेसले २०, माओवादी केन्द्रले ४, एकिकृत समाजवादीले ४ वडाको वडाध्यक्ष पाएका छन् । सत्तागठबन्धनबाट चितवनमा कांग्रेसले ४ पालिका प्रमुख र ३ पालिका उपप्रमुख, माओवादी केन्द्रले २ पालिका प्रमुख र ३ पालिकामा उपप्रमुख पाएको छ । एकिकृत समाजवादीले एक–एक पालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख पाएको छ ।
भरतपुर महानगरमा माओवादी केन्द्रबाट मेयरमा रेनु दाहाल, कांग्रेसबाट उपमेयरमा चित्रसेन अधिकारी उम्मेदवार हुनुहुन्छ । यस्तै कांग्रेसका तर्फबाट प्रमुखमा रत्ननगर, खैरहनी, कालिका, इच्छाकामना, उपप्रमुखमा भरतपुर, माडी, राप्ती पाएको छ । यस्तै माओवादी केन्द्रका तर्फबाट प्रमुखमा भरतपुर महानगर, माडी, उपप्रमुखमा खैरहनी, कालिका, इच्छाकामना पाएको छ । एकिकृत समाजवादीका तर्फबाट प्रमुखमा राप्ती, उपप्रमुखमा रत्ननगर पाएको छ ।
महानगरमा को बलियो ?
भरतपुर महानगरको मेयरमा २७ जना र उपमेयरमा १० जना उम्मेदवारहरु मैदानमा छन् । रेनु दाहाल सत्तागठबन्धनबाट मेयरको उम्मेदवार हुनुहुन्छ । विजय सुवेदी एमाले–राप्रपा गठबन्धनबाट मेयरको उम्मेदवार हुनुहुन्छ । २०७४ को मतपरिणामलाई आधार बनाउँदा दाहाल र सुवेदीबीचनै प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । प्रचण्डको गृहजिल्ला भएकाले पनि महानगरको नयाँ नेतृत्वबारे निकै चासो बढेको छ । दोस्रो पटक मेयर बन्न मैदानमा रहनुभएकी दाहाललाई कांग्रेसका पूर्वनेता जगन्नाथ पौडेलले स्वतन्त्र उम्मेदवारबाट केही मत कटौती गराउने देखिन्छ ।
पौडेल, उहाँका समर्थक र प्रस्तावकलाई कांग्रेसले साधरणसदस्य समेत नरहने गरी कारवाही गरिसकेको छ । २०७४ मा माओवादी–कांग्रेस गठबन्धनका तर्फबाट रेनु दाहालले ४३ हजार १ सय २७ मत ल्याउँदा एमालेका देवी ज्ञवालीले ४२ हजार ९ सय २४ मत ल्याउनुभएको थियो । मेयर पदमा २ सय ३ मतान्तरमात्रै थियो । वडागत पाएको मतपरिणाम केलाउँदा कांग्रेस र एमालेले ३८ हजार हाराहारीको मत ल्याएका थिए । माओवादीले २० हजार हाराहारी मत ल्याएको थियो ।
राप्रपाका मेयर उम्मेदवारले ६ हजार ८ सय ४२ मत ल्याएका थिए । उबेलाका राप्रपाबाट मेयरका उम्मेदवार अहिले माओवादी केन्द्रमा छन् । २०७४ को चुनावमा रहेका महानगरका मेयरका १४ उम्मेदवारमध्ये ठुला तीन दल बाहेकका ११ जना उम्मेदवारको कुल मत २ हजार पनि थिएन । कांग्रेसका पूर्वनेता पौडेल मेयरका उम्मेदवार कायमै रहेपनि एमाले केही उत्साहित छ । तर, सत्तागठबन्धन झनै ढुक्क बनेको छ । “असन्तुष्ट कांग्रेसको भोट अब एमालेलाई नजाने भयो”, कांग्रेसका एक जिल्ला नेताले भन्नुभयो, “सत्तागठबन्धन झन बलियो बनेको छ ।” माओवादीका एक जिल्ला नेताले ५ वर्ष मेयरका रुपमा महानगरबासीले रेनु दाहाललाई चिनिसकेकाले तटस्थ जनताको मत सहजै पाउने दाबी गर्नुभयो ।
“२०७४ मा रेनु दाहाल चिनाउनु परेको थियो, अहिले जनताले आँफै चिन्छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “पार्टीमाथि रहेर मत दिने धेरैको मत रेनुलाईनै आउँछ ।” एमालेपनि विभाजित बनेर एकिकृत समाजवादी बनेकाले तत्कालिन एमालेको मतमा पनि गिरावट आएको विश्लेष्ण ती नेताको छ । भरतपुरमा ५ वर्षमा महत्वपूर्ण ठुला विकासका परियोजनाहरु निर्माणाधिन भएको, संघीय सरकारको ध्यान खिच्न सफल भएकाले विकास खोज्ने जनताले सत्तागठबन्धनमै भोट हाल्ने आँकलन गरिएको छ । तर, एमाले चितवनले एमालेको ४० हजार मत महानगरमा रहेकाले विकासको भिजन भएका नेता विजय सुवेदी विजयी हुने अडानमा छ ।